တစ်ခုကောင်း ကို ပေးပါ။ | မာသင်
ဝန်ဆောင်မှုကိုလဲ ထူးခြားပြောင်မြောက်စွာ ပေးချင်တယ်။
ဈေးနုန်းတွေချပြီး ဈေးသက်သာဆုံးဆိုပြီးတော့လဲဈေးကွက်မှာ ပြိုင်ဆိုင်ချင်တယ်။
ရောင်းချတဲ့ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေး ကောင်းတယ်လို့လဲ မြင်စေချင်တယ်။
ဆိုင်ခန်းနေရာထိုင်ခင်းပြင်ဆင်မှုမှာ အလှဆုံးလို့လဲ ထင်မြင်စေချင်သလို
မြန်မြန်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်မှုပေးတဲ့ Customer service မျိုးပေးတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့လဲ ကြေငြာပြန်တယ်။
လုပ်ငန်းက တစ်ခုတည်း ။ ဖြစ်ချင်တာတွေက များများ။
ဈေးကွက်ကို အကုန်ကောင်းလို့ထင်မြင်ယူဆလာအောင် လုပ်လို့မရဘူး။
လက်တွေ့မှာ .…စားသုံးသူတွေရဲ့ အတွေးထဲမှာ အကုန်ကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုတာ မရှိဘူး။
iphone လို့ပြောလိုက်ရင် ဘယ်လို ထင်မြင်ယူဆချက်မျိုးပေါ်လာပါသလဲ ?
Amazon.com လို့ပြောလိုက်ရင် ဘယ်လို ထင်မြင်ယူဆချက်မျိုးပေါ်လာပါသလဲ ?
Adidas ဖိနပ်လို့ပြောလိုက်ရင် ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆချက်မျိုး ပေါ်လာပါသလဲ ?
မက်ဒေါ်နယ် ဟမ်ဘာဂါ လို့ပြောလိုက်ရင် ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆချက်မျိုး ပေါ်လာပါသလဲ?
KBZ ဘဏ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကော ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆချက်မျိုး ပေါ်လာပါသလဲ ?
အထက်ပါ အားလုံးကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးဆိုတာ စားသုံးသူတွေရဲ့စိတ်ဈေးကွက်မှာ မရှိသေးဘူး။
ကိုယ့်ဆိုင်က … အရသာမှာ အကောင်းဆုံးလား။ ဝန်ဆောင်မှုမှာ အမြန်ဆုံးလား။ ဈေးနုန်းမှာအသက်သာဆုံးလား။
တစ်ခုကောင်း ကို ပဲ ပေးပါ။ ပြောပါ။ ကြော်ငြာပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ပါ။
ပြန့်ကျဲနေတဲ့နေရောင်ကို မှန်ဘီလူး နဲ့စုစည်းလိုက်တဲ့အခါ မီးတောက်ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သလို၊
ပြန့်ကျဲနေတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအားသာချက်တွေကို စုစည်းပြီး တစ်ခုကောင်း၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာလုပ်လိုက်တဲ့အခါ Brand ဘရန်း ဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။
အမှန်တော့ .. ဘရန်းဆိုတာ .. တစ်ခုကောင်းပေးတတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။